GeekColor: Skins, Wraps & Decals. Hazie Ngwaọrụ »#BeDIFFERENT - GeekColor.com
NKWU NDỊ KWURU N'ỤWA!
MacBook Pro 13 (2018, Ogwe Aka)
MacBook Pro 15 "(2016, Ogwe Aka)
MacBook Pro 13 "(2016, Ogwe Aka)
Ime Anwansi 2
Akwụkwọ Ntanaya Microsoft 2 13.5 "
Stealth 12.5 nke Razer Blaze "(Late 2016)
Helios 300 15.6 Acer Predator "
Ndị ọrụ caja
Ọfụma na-ekpo ọkụ Samsung
Ogozi 3M Vinyl. Na-enweghị Nkwụsị & Nkwụsị. Na-eguzogide.
Mkpebi a na-enweghị atụ
Laser Cut: Zuru okè kwesịrị ekwesị. Emere ya na Spain.
Ihe nke Gị ma ọ bụ họrọ site ọtụtụ puku Colors & Textures.
Complete Kits. Easy Ntinye. Na Akwụkwọ ikike afọ 2.
Kedu ihe bụ Skin?
Skins bụ ụzọ dị mfe, dị mfe, kachasị mma iji chebe ma hazie ngwaọrụ gị niile
Kedu ihe mere ị ga-eji chọọ akpụkpọ anụ gị? Nke a bụ naanị ntakịrị ihe kpatara ya:
E si na vinyl na-emepụta ihe ndị na-emepụta ụgbọala na-emepụta ihe, otu ihe a na-eji ụgbọ ala na akụkụ nke bọs obodo. Ihe a na-adị!
EKWERE BỤ N'ỤLỌ
Ha na-atụ ihe dịka 5 (ma ọ bụ 0.005) nke dị puku ise, nke na-eme ka ha buru ibu!
A NA-ECHI IKPE
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ma ọ bụ chọọ ka ọ dị ọhụrụ, gbanye ya. Ngwado anyị pụrụ iche agaghị ahapụ ebe ọ bụla.
EKWERE EKWESỊ EKPERE
Ọ bụrụ na ịnwere ike itinye ihe nkwụnye aka na ụgbọ ala gị, ịnwere ike ịwụnye akpụkpọ ahụ. Akpụkpọ ahụ anyị nwekwara nhazi nke na-egbochi ikuku.
A NA-EKE SAN NA Spain
Akpụkpọ anụ ọ bụla si GeekColor mere ebe a na Spain (Europe). Ụlọ ọrụ anyị dị na Toledo.
SKINS na-arụ ọrụ niile, na ụlọ ọrụ na ngwa mma
Akpụcha akpụkpọ ụkwụ iji dabara ngwaọrụ ọ bụla n'ụzọ zuru oke - n'ime .25mm ndidi. Nke a pụtara na ọdụ ụgbọ mmiri niile, njikwa na ngwa nwere ike iji mee ihe.
Ị na-achọ ka ekwentị gị na-ele anya ma na-ekpuchi ya, ma ọ bụ na ị dị njikere ịhụ ma nwee mmetụta dị iche iche anụ nwere ike ime?
Họgharịa ngwaọrụ gị ugbu a
»Ndozi na GRIT GRIP
Na GeekColor, na mgbakwunye na inye iPhone gị ụdị, ị ga-eme ka njide ya na-ezere dara mgbe ọ na-agba.
Maka maka: Max Xs, Xs, XR, 8 / 8 Plus / 7S / 7S Plus / 6 / 6 Plus / 6S / SE / 6C / 5 / 5S / 5
»AHỤ NDỊ NA-AHỤ
Samsung Galaxy bụ ndị dị ebube iji jupụta mkpịsị aka. Na akpụkpọ anyị, ị ga-echezọ ha ruo mgbe ebighị ebi.
Maka maka: Galaxy S9 Plus / S9 / Nyocha 9 / Lee 8 / S8 Plus / S8 / S7 Edge / S7 / Nyocha 7 / Nyocha 7 FE / Nyere 5 / Nyocha 4 / S6 Edge Plus / S6 Edge / S6 / S5 / A9 / A8 Plus / A7 / A6 Plus / A6 / J8 / J7 Duo / J6 / J4 / J7 Max / J7 Prime / J7 Pro / J5 Prime
»Echiche na Ụdị
Mee ka ekwentị gị bụrụ ihe pụrụ iche ma hụ ihe kachasị ọhụrụ site na nke kachasị ọhụrụ ma bụrụ nke naanị ya.
Maka maka: OnePlus / Google Pixel / LG / Huawei / Motorola / Sony / HTC / ZTE / Xiaomi / Asus / Lenovo / Oppo / Alcatel / Essential Phone / Vivo / Tenor
»Ọ BỤGHỊ ỌZỌ ỌZỌ
Chebe mbadamba nkume gị ma chefuo ụdị ejiji. Kwụsịnụ nchegbu banyere iji ya na-enweghị ikpe.
Maka maka: iPad Pro / iPad Air / iPad Obere / Microsoft Surface / Amazon Kindle
Dezie Mgba Egwuregwu
Dezie njikwa gị na ndị njikwa na agba nke otu gị.
Maka maka: PlayStation / Xbox / Nintendo
Skins Egwuregwu Egwuregwu
»BỤ? Gbanwee anya!
Ghọta ihe oyiyi ọhụrụ na kọmputa gị. Mee ka laptọọpụ gị dị mma karịa ọtụtụ textures na agba.
Maka maka: MacBook / MacBook Pro / MacBook Air / Mac Mini / Magic Magic / Magic Keyboard / Magic Trackpad / Microsoft / Razer / HP / Dell / Acer / Laptops Laptọọpụ
Hazie More Ngwaọrụ
»NKWUKWỤKWỤKWU NDỊ DỊ N'IME, 100% GEEK;)
Anyị na-ekekwa akpụkpọ anụ maka ihe ndị kachasị ewu ewu na ndị ọhụrụ: ihe nyihu, ihe igwefoto ihe ...
Maka maka: AirPods / Apple Watch / Apple Chargers / Beats / GoPro / DJI / Samsung Galaxy Buds, Wireless Charger, Gear / Amazon Echo / Amazon Fire TV / Google Home / JBL / JUUL / Nacon / Xiaomi Mi Ike Bank / Wacom / akpụkpọ anụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị Ọkachamara na Nanị, GeekColor bụ saịtị gị.
Anyị na-enye ndị Njikọta Ukwuu nke ngwaọrụ onwe onye.
Anyị skins na- Ezubere na Emepụtara ya in Spain na nke kacha mma Nhazi na Ogologo Ogologo.
chebe na ụdị na Hazie gị Ngwa na GeekColor »NKWUKWU
AKWỤKWỌ ANYỊ NA-ECHICHE
Ọ bụrụ na ịchọta na ọ dị ọnụ ala, anyị ga-akwụghachite ihe dị iche
Anyị na-aza ajụjụ 365 gị kwa afọ
Home Kpọtụrụ search Nhazi Ụgbọ mmiri ịkwụ ụgwọ Emeela okwu
© 2010-2020 - Kwadoro site GeekColor.com® »NKWU - Ikike
Page 1 Eji edemede.